OweHockey ukhala ezimathonsi ngokugilwa wukhuvethe - Bayede News
ILiverpool ifuna ukubuyisa isithunzi ngeMan City yize ixhugela
Lumgqeme ingozi engeqiwa ntwala ukhuvethe umdlali weHockey uZamokuhle Siphosethu Ngubo. Uthi bekukuningi abefisa ukukwenza nyakenye kodwa ubhubhane ukhuvethe lwamthiya.
“Ngiyakuqonda ukuthi akumina ngedwa ophazamisekile ngokufika kokhuvethe kodwa okwami kube ngokwehlukile kakhulu. Okwenza ngisho lokho ukuthi lo mdlalo awufani neminye, ukumiswa kemiqhudelwano emikhulu yawo kwenza kube nzima kakhulu. Abaxhasi bayentuleka kakhulu kulo mdlalo, uma kuthiwa uyama nalaba abakhona abancane bagcina sebehudula izinyawo,” kusho uNgubo.
UNgubo oneminyaka yobudala engama-27, ungumdlali we-INK Hockey Club okuyiqembu elasungulwa nguNkosinathi Ngubane eminyakeni engama-28 edlule.
I-INK Hockey Club yathi isungulwa yabe igabe ngabadlali abadabuka e-Inanda, eNtuzuma naKwaMashu (INK), kodwa manje isinabadlali bakwezinye izindawo okubalwa uMlaza, iPort Shepstone, iNewcastle, iMandeni nezinye.
Eqhuba uthe: “Nginothando olukhulu lwalo mdlalo, ingakho uma ngiwudlala ngizinikela, ngihlezi futhi ngigqugquzela intsha ukuthi iwudlale. Ngizimisele ukubuyela esimweni sami njengoba uHulumeni wamisa izinto kwangiphoqa ukuthi ngime ukuzilolonga. Izinsiza ezisetshenziswa kuHockey zimba eqolo noma kuthiwa bengithanda bengingeke ngikwazi ukuzilolonga ngedwa. Ngethemba ukuthi njengoba sengiqalile ukuziqeqesha konke kuzohamba kahle,” usho kanje.
UNgubo ufunde eBright Future Pre-School eNanda, eBerea Primary School, eGlenwood Preparatory nokuyilapho aqala khona ukudlala iHockey, wabe eseqeda amabanga aphezulu eGlenwood High School. Kuyimanje wenza izifundo zokuziphatha nokuphathwa kwabantu ezimbonini (Industrial Psychology).
Uke wadlalela iqembu lesizwe labaneminyaka yobudala eli-16, wadlalela i-University of KwaZulu-Natal (UKZN), wamela isifundazwe iKwaZulu-Natal kwabaneminyaka engama-21 nabadala.
“Kuyajabulisa ukuthi ukhona umqhudelwano ozokuba ngoNdasa, yize imininingwane ingakaphumi yonke kodwa ukhona ozokuba khona okuyi-Inter-Provincial Tournament. Lapho ngizobe ngidlalela iKZN Raiders. Ngizimisele ukuthi lo mqhudelwano ufike ngimi ngomumo ngenze kahle njengoba ngihlezi ngenza. Ngiyazi kuzoba nzima ngoba umuntu kade agcina ukudlala kodwa ngikholwa ukuthi siningi isikhathi engizosithola ekutheni ngibuyise ifomu yami. Okunye kuyo Inter-Provincial Tournament ngizophinde ngibe umqeqeshi okokuqala, ngizobe ngiqeqesha iqembu labaneminyaka yobudala engaphansi kwengama-21 labesilisa lalapha esifundazweni iKwaZulu-Natal,” kusho uNgubo.
Uthe uyafisa ukuthi abadlali balo mdlalo bangayihlonipha imiyalelo kaHulumeni ngoba akafisi ukuzwa kuthiwa uyahlehla lo mqhudelwano noma uphinde uyamiswa lo mdlalo.
Eqhuba uNgubo uthe: “Okunye engikubhekile ukuvulwa kweligi enkulu kuleli iSA Hockey Premier League. Kuhlezi kuyinto ethokozisayo ukudlala kule ligi enkulu kuleli ngoba iveza amathuba amaningi. Iyona enxenxa abaxhasi kulo mdlalo.”
Uthe lo mdlalo uwuthanda ukufa kodwa yinye vo into ehlezi imuphatha kabi ngawo okuwukucwasana.
“Ukucwasana yinto edla lubi kulo mdlalo. Uthando luze lucishe ukuphela uma kuvela ukuthi kukhona umehluko phakathi kwaboHlanga nabamhlophe. Okuke kungigqugquzele ukuba ngingapheli amandla ukuthi nakhu namuhla i-INK Hockey Club isakhona kodwa iphila ngaphansi kwale ngcindezi. Ngiyafisa ngelinye ilanga sibe munye kulo mdlalo, lokho ngethemba ukuthi kuyokwenza iqembu lesizwe nalo lenze kahle,” kusho uNgubo.
UNgubo ubalwa nabanye abadlali abanyuse igama le-INK Hockey Club phakathi kwabo okukhona uSihle Ngubane osemele iKwaZulu-Natal emiqhudelwaneni eminingi noNduduzo Mchunu oke wadlala naphesheya kwezilwandle.
nguSabelo Maphumulo Feb 5, 2021